Owesifazane onamandla, oqhakazile futhi ojabule owazuza i-hot appearance evela kuye Umama - uSvetlana Tom. Ukuhambisa futhi nesibindi, ngamehlo ashisayo okuthiwa "fox". Konke lokhu kuyi-Irina Lachina. Umdlali wezintandokazi eziningi ezihambisana nokuziphatha kwakhe nokubukeka empilweni uyazi ukuthi angabamba kanjani imibono yakhe.
U-Irina Lachina - umlando
Emndenini kaSvetlana Tom no-Oleg Lachin ngo-1972, umculi wekusasa ne-cinema ozayo uzozalwa, kodwa manje u-Irina uyintombazane enhle enamahloni aluhlaza. Ngokwehlakalo esibuhlungu sezimo, akazange abone uyise, owake wafa lapho umntwana engakaze abe nonyaka ubudala. Ukuhlala emsebenzini, umama wayenganika indodakazi yakhe isikhathi esincane, ngakho u-Ira omncane wakhulelwa ugogo wakhe.
Edolobheni laseBalti eMoldova, u-Irina Lachina wakhula. I-biography yakhe njengomdlali we-actress yaqala lapho ephothula esikoleni esiphakeme. Isimo sobudlova sasivele sicatshangwa ngengqondo ekhona ngaleso sikhathi, ngakho-ke, ngaphambi kokukhetha umsebenzi, u-Irina wanquma ukuzama isandla sakhe ngezinhloso ezihlukahlukene. Ngokushesha ngemva kokuphothula iziqu wakwazi ukusebenza ezindaweni ezihlukahlukene, wazama ngisho nokuhlela ifilimu. Kodwa, njengoba ngokuvamile kwenzeka endaweni yokudala, isiphetho sakhe sinqunywe ngengozi.
Ngesinye isikhathi, eshaya isampula esithombeni somqondisi odumile, u-Irina wakwazi ukuzibonakalisa ngokucacile emifanekisweni ehlukile - intombazane nentombazane eneminyaka eyikhulu ubudala. Amasampuli alandelwe isimemo esiyinhloko. Imithwalo yemvelo edingekayo kumdlali wesonto elizayo ngokushesha ukugcwalisa igebe kolwazi, futhi ngesikhathi esifanayo yamnqumela inkinga yokukhetha umsebenzi, futhi ngo-1988, uLachina wangena esikoleni iShchukinsky Theater.
Abazali ababizwa ngokuthi
U-Irina Lachina uyindodakazi yomdlali odumile waseSoviet noRussia uSvetlana Tom. Kufanelekile ukusho ukuthi i-heroine yethu izuzwe ifa kumama wayo akuyona nje ukukhanya okubonakalayo. USvetlana, umama we-actress, futhi namhlanje kudingekile kakhulu ku-cinema naseshashalazini. I-Gypsy Rada, mhlawumbe, indima yakhe edume kakhulu ku-cinema. Indodakazi yempinduko kanye nommakhomanisi, owesifazane waseMoldavian ne-French izimpande - le nhlanganisela evuthayo yethando, ithalente, umusa nesibindi kwenza uSvetlana aqaphele futhi uyathandeka. U-Irina ufana nomama wakhe, uzama ukuphelela kukho konke, futhi umgomo wakhe oyinhloko awukuthandwa njengalokhu, kepha ikhono lakhe langaphambili nokuzivuselela.
Umsebenzi wokuqala obalulekile kumabhayisikobho we-actress wokuqala waba indima ebalulekile kumdlalo we-"Wandering Stars" uVsevolod Shilovsky. Esikhathini sendaba, intombazane yesifundazwe iguqula yona ibe i-opera diva, ihlabele uthando lwayo kanye namaphupho angumntwana enkazimulweni. Emisebenzini yakhe yamuva, ukuguqulwa okunjalo kungabonwa. U-Irina ungumdlali wezandla eziningi, futhi izinhlamvu eziqhakazile ezinenkinga enkulu, ezibhekene nokuzikhethela, yiyona indima yakhe ngempela. Yenza ukukhetha okunzima, uvikele ilungelo lakho, uguqulwe ngaphandle kokuqaphela futhi uhlale ngesikhathi esifanayo - ngakho-ke kungaba kuphela uLachina Irina. Ifilimu ye-actress ifanele imisebenzi efana nayo. Nakuba yena ngokwakhe ethi ukhetha lezi zimo ngendlela afisa ngayo.
U-Lachina Irina, u-filmography wakhe uhlanganisa amafilimu amaningi futhi uchungechunge oluthile lwethelevishini, uthola emisebenzini yakhe ngayinye ukuthi ungamangala kanjani umbukeli. Amafomu abiza ngokuthi iyamangalisa, iyabukeka, inomusa futhi inhle. Futhi ngempela, ungahlanganisa kanjani ama-hypostases amaningi kangaka? Konke lokhu - izici zobunikazi bakhe, noma imfihlakalo ilele kuthenda elingahle lilingane? Nazi ezinye zezenzo zakhe zokwenza:
- "I-Wandering Stars" - umculi we-opera uRaizl.
- "KuKristu esifubeni" - amahlaya asePoland, lapho u-Irina edlala khona i-heroine eyinhloko uMarusya, ephikisana nobulungiswa emzaneni othile.
- Uchungechunge lwe-TV "Lady Bomzh" nelithi "Lady Boss" - indima eyinhloko eyenza lo mdlali abe ethandwa ngempela eRussia naseCIS. ULisa Basargina waba isithombe sabafazi abaningi banamuhla.
- Uchungechunge lwe-TV "Isihlabathi Esisindayo" - uhlamvu oluyinhloko uRachel. Indaba yothando, ukuhlupheka, ukwethembeka nokuthethelelwa ngokumelene nesizinda sezingxabano zomphakathi, izimpi kanye nezinguquko.
- "Ngizowenza isimangaliso" - ifilimu ye-lyric mayelana nothando nethemba lokusasa okusobala.
Inendima ochungechungeni ethi "Lady Bumzh" no "Lady Boss"
Indima yakhe ethandwa kakhulu, ngenxa yokuthi umdlali we-actress wabonakala kanjani. Umlando Owesifazane owathi, ngokuthanda kwezinkinga, waba yisisulu sokukhashelwa nokuboshwa. Indaba yokubuyela ekuphileni, ukunqoba, yothando nokudumazeka. Ukulinganisa kwababukeli bekuphezulu kakhulu, uchungechunge lwalubukezwa ngokuhlaziya okuningi. Kuze kube manje, kujabulise ukubuyekezwa. Abathengisi nabagxeki bayaqiniseka ukuthi u-Irina Lachina uyisinqumo esiphezulu kakhulu. Akekho umuntu owayengayenza kangcono le ndima. Kubonakala sengathi wonke umuntu uyajabula ngomdlalo, kodwa hhayi u-Irina Lachina. Ukukhula nokuthuthukiswa kwakhe njengomdlali we-actress kudinga indima engavamile. Ngakho-ke, uhlale egcizelela ekuxoxweni kwakhe ukuthi akafuni ukuhlangana namalaleli kuphela noLisa Basargina.
Mayelana nesifo somfundi ohloniphekile
Isidakamizwa segolide selesi sikole, isiqu esikoleni eShchukin esihloniphekile ngu-Irina Lachina, umlingisi. I-biography yentombazane evela esifundazweni ibonakala ngeziqephu ezinjalo okuthiwa "i-student's syndrome enhle kakhulu" ingabonakala ngokucacile. Njengoba umdlali wezemidlalo evuma, akazange ahlukumeze isimo noma irejista.
Ukuzama ukuphumelela yisifo sakhe. Ukuzihlambalaza kakhulu nokuziphazamisa ekuzihloleni amakhono akhe, u-Irina ubona ngokugcwele amaphutha emsebenzini wakhe futhi uzama ngawo wonke amandla akhe ukulungisa labo. Kusuka ngaphandle, lokhu kungase kubonakale sengathi yi-paranoia, kodwa eLakina lokhu umkhuba osekude okwenzile lokho. I-syndrome ye-student's best, yebo, ikhona, kodwa ijaji eliyinhloko kanye negunya elilodwa lomdlali wezemidlalo ngumqondo wakhe. "Ungazenzeli izithombe" - lo myalo ngowokuqala, futhi akalahli izinkolelo zakhe.
Ukuphila komndeni nomuntu siqu
U-Irina Lachina ungumfazi nonina onothando. Ukujikeleza emvelweni womdlali, kuba nabaningi abamdumayo nabathandayo, yena uhlonipha amasiko omndeni. Ngomyeni wakhe u-Oleg ohlangane naye ngonyaka wesibili we "Pike", futhi kusukela ngaleso sikhathi akekho amanye amadoda kuye.
Ekhanyayo, enamandla, engavamile, sibona u-Irina Lachina. Ukuphila komuntu we-actress kugcwalisa isithombe esibucayi, okwenza sijule ngempela. Ngokombono we-heroine wethu, owesifazane unesitoreji samandla esiphambene, futhi uma efuna, khona-ke amandla akhe okugcoba izindlu futhi anike wonke umuntu ngothando lwakhe.
Umdlali we-actress uthi uma ehlala isikhathi eside nomyeni wakhe othandekayo, uma eqonda ngokugcwele ukuthi bayinto eyodwa. Ukukhetha omunye kanye, lezi ezimbili ziyisibonelo sobuqotho, ubungane, uthando kanye nenhlalakahle yomndeni weqiniso.
Mayelana nezilwane ozithandayo
Umlingisi uLachina Irina ungumthandi omkhulu wesilwane, futhi njalo ugcizelela lokhu. Ngombono wakhe, benza abantu babe ngabantu. Ekhaya lakhe kukhona indawo yamakati, izinja, ama-hamsters nezinye izilwane. Njengoba u-Irina ngokwakhe ekhuluma, zonke izilwane ezisendlini yakhe ziyi-mongrel, futhi, njengokungumthetho, zithathwa emgwaqweni. Omunye usindiswe kusuka ngaphansi kwamavili wezimoto, othile uqothulwe ezandleni zabanikazi ababi. Umqondo oqinile wobulungisa awuvumeli ukuba adlule ngesilwane esibuhlungu, ikakhulukazi uma kulula ukusiza. "Endlini yethu, wonke umuntu unesikhala esanele, uthando nokudla" - le nkulumo iqukethe iphuzu elingenakukhungatheka lomdlali wezinkampani ngenkinga yokugcina inqwaba yezilwane ezifuywayo.
Ngendlela, kwiphrojekthi yethelevishini "I-Circus ne Stars" kwesinye sezinombolo u-Irina wakwazi ukunqoba i-tigress. Ngokusho komdlali wesifazane, akazange ahlasele noma ubani, nje isidumbu sibheka isimo sengqondo, ukuthakazelelwa nokuzethemba, futhi lezi zimfanelo ziheha izilwane kanye nabantu. Ngaphezu kwalokho, umlingisi ngokwakhe wakhulela ezungezwe yizilwane ezifuywayo futhi wajabulisa uthando indodakazi yabafowethu abasebasha. Futhi bathola endlini abavame ukubuyisa.
Ukubuka umlingisi, akulula ukunquma ubudala bakhe. "Angikaze ngibe nesipulasitiki futhi, ngithemba, ngeke" - uqinisekisa abalandeli baka-Irina. Isithombe ngokukhethekile Qinisekisa ukuthi umuntu ojabulayo akazwa kahle kuphela, kodwa futhi ubukeka ngendlela efanele. Ngemva kokushintshanisa iminyaka eyishumi futhi ebelethe ingane, wakwazi ukugcina isimo esihle ngokomzimba futhi, kubonakala sengathi akazange ashintshe nhlobo kusukela phakathi no-90s uLyuba edlalwa ku-sitcom "Klubnichka".
Amasiko nendlela yokuphila u-Irina abambelela kumama wakhe nomndeni wakhe. Ukudla okunempilo, imidlalo, isiyalo kukuvumela ukuba ugcine isimo esihle somzimba, esibaluleke kakhulu emsebenzini wokusebenza. Futhi ukwethembeka kukaLachina emsebenzini nokuphila kusindisa ekucindezelekeni nemiphumela yabo. Ngaphezu kwalokho, ungumndeni futhi akazicabangi ngaphandle kwendlu, ngaphandle komyeni wakhe othandekayo, indodakazi nezilwane ezifuywayo. Ukuqiniseka okunjalo kwangaphakathi, ukwethemba, ukwethenjelwa - lokhu kuyinhloko yayo, okungaveli kuwo ngaphansi kwanoma iziphi izimo.
Amaphrojekthi we-TV nezinhlelo zekusasa
U-Irina Lachina ungumuntu okhuthele kakhulu. Akahlali phansi, ngoba igazi elishisayo namandla amanga enza ukuba azame zonke izinhlobo ezintsha. Ezemidlalo ne-plastiki, uhlanganyela emibonweni yokudansa, ubonisa ithalenta le-acrobatic.
Uthando lwakhe lwezinwele neziketi liyaziwa abalandeli bakhe abaningi. U-Irina, unina uSvetlana Toma nendodakazi kaMas banenhlonipho enkulu ngezemidlalo, bahlanganyela futhi abazi lutho ukudla. Indlela esebenzayo yokuphila, ukungabi khona kwemikhuba emibi, ukwethembeka nobubele kuyisibopho sobuhle nempilo, isiko lomndeni kanye nesiqubulo somndeni.
Angithandi ukudalula izinhlelo zika-Irina zokudala. Uvuma kuphela ukuthi akasoze enze ukukhetha okungavamile phakathi kwe-cinema nemidlalo yaseshashalazini. Kungesikhathi lapho udumo nedumela likuvumela ukuthi ukhethe izindima ngokwakho. Le nkululeko iyigugu kakhulu kumdlali wezandla ezinamandla afana no-Irina. Ukuhamba kuwukuphila, futhi lawa magama ayasebenza hhayi kuphela emidlalweni yezemidlalo nokuphila kwansuku zonke. Ukuze udlale izindima ezifanayo, ayeke ekuthuthukiseni futhi uyeke ukuzihlola ngamandla kunesizathu sokubulala seLachina njengomdlali wesithandwa nomuntu.
"Poddubny": ukubuyekezwa kwababukeli nabagxeka mayelana nefilimu. Ingabe kufanelekile ukubukela ifilimu Poddubny (2014) nge Porechenkov
I-biography kaDuane Johnson: i-wrestler, umlingisi kanye ... nommeli!
Uhlu lwamabhayisikobho noPilbert Richard abaqambi be-cinema ye-French yangempela
Umlingisikazi Zoe Fedorova: Biography, izithombe, i-Filmography
Indlu amagundane: incazelo nesithombe. Kungakhathaliseki endlini igundane Ukulunywa? Indlela ukuqeda indlu amagundane
Kungani dream of a entabeni? Dream ncwadi kuyobe ngiyisho
Ebusuku e Moscow: lapho ukuya intombazane?
Umlingisikazi Suonk Hilari: amabhayisikobho best, biography, empilweni yakho